Cristiano Ronaldo oo rumeeyay riyada wiilkiisa yar ee Junior – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo rumeeyay riyada wiilkiisa yar ee Junior
Dajiye July 28, 2018
(Juventus) 28 Luulyo 2018. Xidiga kooxda Juventus ee reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay riyada heerka uu doonayo inuu gaaro wiilkiisa weyn ee Junior, kadib marka uu noqdo ciyaaryahan ku heer ah xidigaha waaweyn ee kubada cagta sanadaha soo adan.
Wiilka Cristiano Ronaldo ee Junior ayaa haatan da’adiisu tahay 7 jir, wuxuuna bilaabay inuu qaado talaabooyinkiisa ugu horeeya ee kubada cagta, kadib markii uu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya kooxda da’yarta uu kaga ciyaaro dalka Spain.
Cristiano Ronaldo ayaa in badan soo dhigay fiidiyowyada ku xusan goolasha uu wiilkiisa ka dhaliyay kulamada uu ciyaaray.
Xidiga ku guuleestay 5 jeer abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Or ayaa ka hadlay qaab ciyaareedka cajiibka ah ee wiilkiisa iyo rajada uu ka leeyahay kubada cagta.
“Wuxuu ii sheegay inuu noqon doono ciyaaryahanka ugu fiican kubada cagta xitaa aniga uu iga fiicnaan doono, isla markaana uu ku guuleysan doono abaal marino badan ee ah Ballon d’Or”.
Si kastaba Ronaldo ayaa haatan heysta Ballon d’Or 5 jeer, isagoo kala siman Lionel Messi, wuxuuna markale kula dagaalamayaa sanadkan 2018, 9 xidig kale, iyadoo guuleystaha abaal marinta lagu dhawaaqi doono 24-ka September.
Barcelona oo Premier League ka raadinaysa saxiix aan suurogal ahayn suuqa xaggaagan!
Ancelotti oo ka hadlay wararka Edinson Cavani la xiriirinaya kooxdiisa Napoli